राजनीति र नेता सम्मान प्राप्त गर्ने क्षेत्र वा पद भन्ने बुझ्न खासै गाह्रो छैन । हुने पनि त्यसै हो । तर वर्तमान समयमा यसो भन्यो भने त्यो व्यक्ति नै ठिक छैन कि ? भन्ने हुन थालेको छ । कारण नेता भनेपछि पद, पैसा र पावरका पर्यायवाची जस्ता भएका छन् । उनीहरुले गरेका कर्मले राजनीति क्षेत्र घिनाएको छ र उनीहरु पनि बद्नाम भइरहेका छन् ।
राजनीति गर्ने उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्मका नेताहरुको स्वार्थ र आडम्बर कार्यशैलीले न राजनीति क्षेत्र सम्मानित छ, न नेताहरुले नै सम्मान पाउने अवस्था छ । कारण उनीहरुको लोभी, लालची र स्वार्थी कार्यशैलीले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई दूर्नाम बनाउँदै लगेको छ । यो सब हुनुमा आफू नमरेसम्म पद, पावर र पैसामा अरुको आगमन नहोस् भन्ने नेतृत्वपंतीको ढोंगी सोच कारक भएको छ । राजनीतिकर्मीले त देशको साख उच्च राख्ने र आम नागरिकबाट सम्मान पाउने काम गर्नु सक्नु पथ्र्यो । मूल ध्येयमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरु प्रायः चुकेका चुकेकै छन् ।
अमेरिकी सहयोग मेलेनियम च्यालेन्जर कम्पनी ( एमसीसी ) को जाबो ५०÷५५ अर्ब रकमका लागि उनीहरु ‘त्वम् शरणम्’ हुन मरिहत्ते गरेको सन्दर्भले पनि नेपाली राजनीतिकर्मी र दलहरुलाई गिज्याई रहेको छ । एउटा एनसेल कम्पनीको बक्यौता उठायो भने ६२ अर्ब जति रकम त यतिकै मुलुको खातामा जम्मा हुन्छ । अनि एमसिसीका पछाडी परेर मुलुकलाई किन अमेरिकाको क्रिडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन् ? प्रश्न अनुत्तरित छ भ्रष्टाचारी र ठग कम्पनीहरुबाट उठ्न बाँकी रकममा जोड दिने हो भने नेपालमा विकासकै लागि खासै रकम अभाव नहुन सक्छ । विकाश गर्ने दृढ इच्छाशक्ति र कर्म प्रतिको असल लगावको मात्र मुलुकका खाँचो छ । त्यो खाँचो पूर्ति गर्न मुलुकको उच्च पदस्थ तहमा पुगेका व्यक्तिहरुबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसमा नेपालका राजनीतिहरु चुकेकै छन् ।
नत्र नेपाल जस्तो सानो मुलुकको विकाश धेरै अगाडी बढिसकेको हुने थियो । कमिशन खाने गलत शैली र त्यो सुधार गर्न नचाहने एकनासे शैलीले विदेशी सामु नेपाललाई लुत्रुक्क पर्नु परेको छ । राजनीतिक उच्च पदमा हुनेहरु प्रायः कुनै न कुनै मुलुकका एजेन्टका रुपमा प्रस्तुत हुने शैलीले मुलुकको शिर लत्रिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको लोप भएको चुचे नक्शा प्रकाशमा ल्याएपछि सत्ता बाहिरका र खास गरी एमाले भित्रका पनि विदेशीका चाकडहरुको असहयोगले सत्ता परिवर्तन सम्भव भएको प्रष्ट छ ।
बरु उनीहरुले राजनीतिक वृत्तबाट दूर्नाम गराउँदै हिडेको मुलुकलाई खेल क्षेत्रका खेलाडीहरुले शिर ठाडो पार्न योगदान गरिरहेका छन् । राज्यले खासै लगानी नगरे पनि आफ्नै खर्चमा कहिले क्रिकेट खेलाडी त केहिले फूटवल खेलाडी लगायत एथलेटिक्सका खेलाडीहरुले मुलुकको पहिचान माथि उठाउन सकेका छन् । बिहिबार पनि नेपाली महिला फुटवल खेलाडीहरुले बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ । घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा पहिलो पटक छिरेका महिला फुटवल खेलाडी मध्ये डेब्यु गरेका खेलाडीले मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित ग¥यो । जनताको नाममा राजनीति गरेर कहिले नथाक्ने नेताहरुलाई खेलाडीले मुलुकको शिर उच्च पार्दा गतिलो पाठ सिकाएको छ । शरम हुने र कुनै पनि मुलुकको एजेन्ट नहुने हो भने यस्ता सन्देशले नेताहरुलाई लज्जित हुनु पर्ने हो । ता कि राजनीतिक खेलमा उनीहरु सधैं पराजित मात्र छन् ।
#सम्पादकीय #खेलाडी #नेता #राजनीति
सोमवार, भदौ २८, २०७८, ०२:०९:००
सम्पादकीय-अख्तियारको आँखा चौतर्फी होस्
सम्पादकीय- भ्यागुत्ताको धार्नी र काँग्रेसको महाधिवेशन
श्रावण २६, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता